linspire [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/d/d5c75591e29dbf202d20d60bd22fa822.xhtml failed
Ny linspire dia distribution linux iray izay mihambo ho mora ampiasaina indrindra, ka afaka ampiasain’ny rehetra na tsy mahalala zavatra firy momba ny Unix / linux aza. Lindows no anarana nentiny taloha, fa noho ny disadisa tamin’i Microsoft izay tompon’ny marika Windows, dia voatery novaina ho Linspire.
Michael Robertson no namorona azy, ary nalaina avy tamin’ny Debian. Araka izany dia afaka mampiasa an’ireo fonosana deb ho an’ny debian izy, ary afaka mampiasa APT miaraka amin’ireo repository debian. Ny fonosana ho an’ny Debian Sarge (stable) moa no afaka miaraka amin’ny Linspire 5.0, ny kinovany farany amin’izao fotoana izao.
Ny tena mampiavaka ny Linspire dia ilay teknolojia antsoin-dry zareo hoe CNR (Click ‘N Run). Io dia fomba iray tsotra izay ahafahana mametraka rindrankajy avy amin’ny aterineto, alaina avy any amin’ny server-ndry zareo any.
Toy ny ankabeazan’ireo distributions vidiam-bola moa, dia miaraka amin’ny tohana ara-teknika ho an’ireo rindrankajy “proprietary” izany hoe tsy OpenSource. Ireto no matetika tafiditra ao anatin’izany:
Crossover Office: ahafahana mandefa rindrankajy vitsivitsy natao ho an’i Windows
Drivers: indrindra ireo driver Nvidia sy ATI (karatra grafika), na driver-na imprimantes, sns ...
Codecs: wma, wmv, asx, divx, ...
Ireo rindrankajy hafa toy ny Java, Flash player, ...
Ny Linspire dia distribution vidiam-bola. Vidiam-bola koa ny fahafahana mampiasa ny Warehouse misy an’ireo rindrankajy azo apetraka amin’ny alalan’ny CNR. Fa ny zava-baovao dia ny nivoahan’ny distribution iray avy amin’ny Linspire (compatible tanteraka amin’ny Linspire), fa tsy mirakitra afa-tsy ireo fitaovana opensource, ka azo alaina maimaimpoana, dia ny Freespire.
Pejin’ny Linspire: http://www.linspire.com/
Pejin’ny Freespire: http://www.freespire.org/
Tuto Video Linspire (format flash): http://media.linspire.com/howto/kiosk.swf
linspire.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43